Kansarka naasaha oo Iswiidhen ku soo kordhaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kansarka naasaha oo Iswiidhen ku soo kordhaya
La daabacay tisdag 25 juni 2013 kl 12.00
Sawirle: American College of Radiology/Linda Forsell. Scanpix
Dhacdooyinka kansarka naasaha ayaa Iswiidhen kor ugu kacay boqolkiiba 20 shantii sano ee ugu dambeysey. Sannad walba waxaa kansarka naasaha laga helaa dumar tiradoodu kor u dhaaftay 8000 oo qof. Tiradaasina waa soo kordheysey sannadba sannadka ka dambeeya.
Caalin cilmiga cudurada mindhicirada oo lagu magacaabo Signe Borgquist kana hawlgala jaamacadda Lund wuxuu wargeyska Sydsvenskan u sheegay in aan shaki ku jirin in dad badani cudurkaan la xanuunsanayaan.
Sababaha loo aaneynayo kororka cudurkaan waxaa ka mid ah da’da iyo tirada dadka oo sii korhdeysa iyo caadooyinka hab-nololeedka oo isbeddel ku yimid. Waxaa kaloo ka mid ah in dumarka raajada naasaha laga saaro ay soo bateen. Kolkaas waxaa la oran karaa in heerka dhacdooyinka kansarka naasaha oo hadda la helo uu sare u kacay.
Isha: Sydsvenskan, Netdoktor iyo TT